Ohlela ukuthatha wonke umndeni eholidini? Futhi yini okufanele uyenze ngale iholide ezincane? Kuwufanele ucabange ngalokhu kusengaphambili ukuze abanye ayizange spoilt, futhi wonke amalungu omkhaya bayaluthanda lolu hambo. Ikhumbule zonke imininingwane lonke ngokuhlanganyela kunzima kakhulu - kodwa ungakwazi okungenani ukhethe zokungcebeleka lapho kukhona amahhotela izingane - izinga okusezingeni futhi okungabizi.
iholide Wezingane kungaba ezihlukahlukene ...
The best umndeni iholide kungaba Spanish ipaki ngokuthi «Port Aventura». Lokhu epaki ingenye kunawo wonke eYurophu, etholakala kuleyo nsimu enkulu, nsuku zonke uthola izinkulungwane zezivakashi abasha nomama wabo futhi obaba. Spanish ipaki - ezweni ahlukene kuzo nalezo aphila kuzo "umlilo dragon" nama-slide amanzi zitholakala zihamba emigwaqweni kukhona cowboy yangempela, futhi cafe ungakwazi ukuthenga okumnandi kakhulu cotton candy , futhi yebo, u-ice cream. ezikhangayo eziningi ziyatholakala izivakashi wanoma yimuphi yobudala, ezihlukahlukene zokudla zinikeza ukunambitha amakhulu sokudla okwehla esiphundu we-Spanish futhi cuisine European, futhi abazali abasha isikhathi nomunye futhi, Esenze uhambo romantic on nge-gondola.
Budebuduze kwepaki kukhona amahhotela izingane kanye nabantu abadala «Port Aventura», «Igolide River» futhi «Ihhotela El Paso», emakamelweni lapho abazali ungaba ukuphumula okuhle ngemva kosuku olumatasa, futhi izingane - ukungcebeleka ngokusebenzisa le nsimu, ahlotshiswe isitayela Wild West, noma nanesikhathi sokuba egumbini edumile Woody Woodpecker, cartoon abalingiswa studio "Disney".
I zokungcebeleka engcono ezinganeni (kuze kufike abazali babo) zicatshangelwa abahambi eziningi ebona, zitholakala e-Italy. lapha kuphela ungathola inhlanganisela ephelele - emoyeni ahlanzekile, ubuhle emangalisayo ebukeka, amabhishi modernly ifakwe nezindawo uphumule. Konke lokhu, kuhlanganise ingqalasizinda athuthukile kakhulu lwamahhotela yezihambi, edonsa imvelo yimpumelelo kakhulu kuwo wonke amalungu omkhaya. Kulapha ungakhetha ehhotela kangcono izingane - «Mare e Pineta», elise-Adriatic. Lapha, konke yakhelwe izivakashi omncane engenathi - imenyu ekhethekile, uhamba umsedari * nomkhoba kanyekanye, o-Ashera, ebaleni lokudlala kahle kanye imidlalo Igumbi yesimanje.
Eyesibili ethandwa kakhulu iyona ehhotela «Le Soleil» e le Riviera Venetian. emabhishi ayo segolide sezulu emangalisayo enze kube nokwenzeka ukuba azigcini nje ngokuba ukuphumula okuhle futhi sithole amandla, kodwa futhi ukuba ngithuthukise impilo yabantwana. Ngaphezu kwalokho, amahhotela amaningi izingane e-Italy ukunikela lokuzikhethela eziningi zokuzijabulisa, phakathi kwesikhathi lapho izivakashi wabheka emva by abafundisi abangomakad 'ebona. Abazali abakwazi ukushiya ngokuphepha kwezingane zabo ku zokudlala, emadamini ekhethekile, kanye amapaki ezokuzijabulisa futhi amapaki amanzi.
Quality nokokuzilibazisa wonke umndeni umenyiwe iphendukele eBulgaria. Cishe lonke ugu yezwe kufanelekile iholidi emangalisayo umndeni - yokungcebeleka ophithizelayo "Esihlabathini Golden" futhi "Beach Sunny", isigodi esincane "Buka konke" noma resort "Albena". Ungakhetha endaweni enomsindo, lapho eziningi ezinye izivakashi nokuzijabulisa ngabo, futhi ungaya khona iholidi lomkhaya umuntu akakwazi ubuhlungu. Futhi eqinisweni, futhi kwelinye icala zokungcebeleka Bulgarian ukunikela izivakashi zayo okungcono konke - amanzi afudumele ogwini Black Sea, amahhotela upscale izingane nge omama kanye obaba ezimisiwe Uhlelo kwamasiko.
Hlala the best in ehhotela «Miramar», engabanikazi bephephandaba omunye emabhishi ngenalutho kahle igcinwe futhi zikhululekile. Ukuze izingane ngale ndawo zonke izimo ukuqinisekisa ukuthi akwazi ukuzinikela iholidi emangalisayo ehlobo, cishe akhohlwe abazali bakhe. Lezi zinceku yilezi swimming pool kanye ukuqina isikhungo, volleyball kanye imicibisholo, kungenzeka ukwenza ichibi itafula futhi table tennis. Ngaphezu kwalokho, eBulgaria, abantwana uqobo lwabo bazokujabulela langa animation kanye Uhlelo ukuzijabulisa, okuzokwenza wonke umndeni kwakuhlala isikhathi eside.
Kanjani hhayi ukuthi usephutheni sikhethe ski resort e-Austria?
Awe-Hitchhiking: ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo, imithetho, ukubuyekezwa
Kokudlala zoo (Nizhniy Tagil) umema izivakashi
Amaholide Inkokhelo kuncike zinhlobo: Abanye Izinto
Njengoba usawoti ubhekeni esihlwabusayo: ulungiselela indlela eyomile futhi brine
Salmon Pink kuhhavini namazambane
Samsung 8190: ezibekiweko lobuchwepheshe kanye nokubuyekeza
Vasculitis - kuyini? Izimpawu oluhambisana ifomu isifo